Ahoana ny fomba hahitana trano fialofana any India? – ALinks
Mikaroka ao amin'ny Google Maps ianao 'fialofana ho an'ny daholobe ao amin'ny (anaran'ny tanànanao)' na 'fialofana ho an'ny daholobe ao amin'ny (anaran'ny tanànanao)'. Izany dia ny fitadiavana fialofana ara-tsakafo na aiza na aiza manerana an'i India. Amin'ity sari-tany ity, azonao atao koa ny mahita hoe ivon-toerana 'hamarinin'ny governemanta'. Afaka manandrana ianao Mapmyindia app, tahaka ny efa niara-niasa tamin’izy ireo ihany koa ny fitondram-panjakana ankehitriny.
Mety hiova ny toeran'ireo trano fialofana ireo, koa anontanio ny manodidina hoe aiza no ahitanao azy. Tempoly, Moske, Fiangonana, na foibem-piarahamonina dia toerana ahafahanao manontany ihany koa.
Google Maps dia amin'ny fiteny valo samy hafa ampiasaina manerana an'i India.
Asio 'Fialofana sakafo ao (tanànanao, tanànanao, na toeranao)' na 'Fialofana alina ao amin'ny (tanànanao, tanànanao, na toeranao)' amin'ny sari-tany Google. Izany dia ny fitadiavana fialofana ara-tsakafo eo akaikinao any India. Azonao atao ihany koa ny mahita hoe aiza no ivon-toerana misy ny governemanta amin'ity sari-tany ity.
Saingy, ny etikety sarintany dia ho amin'ny fitenin-drazanao. Ary koa, hiseho amin'ny fiteny nofidinao ny fampahafantarana toerana.
Jereo manodidina anao ny lapan'ny vondrom-piarahamonina, ny lakozia ho an'ny vondrom-piarahamonina, ny trano fialofana amin'ny alina, ny foibem-bary ho an'ny daholobe, na ny toeram-pisakafoanana maimaim-poana.
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana trano fialofana ao Delhi. Nikaroka ny “Fialofana ho an'ny daholobe, India” tao amin'ny Google Maps amin'ny teny anglisy aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana "Fialofana sakafo akaikin'i India" na "banky sakafo any India".
Misy amin'ny fiteny indiana valo ny sarintany Google. Anisan'ireo fiteny ireo ny Gujarati, Kannada, Urdu, Bengali, Marathi, Urdu, Tamil, Telugu, ary Malayalam. Ny etikety sari-tany dia amin'ny fiteninao eo an-toerana, saingy hahita fampahalalana momba ny toerana amin'ny fiteny nofidinao ianao.
Ankoatra izany, azonao atao ny manandrana Mapmyindia app, tahaka ny efa niara-niasa tamin’izy ireo ihany koa ny fitondram-panjakana ankehitriny.
Ireo sakafom-bahoaka sy trano fialofana amin'ny alina dia mety hanome fitsaharana ho an'ny rehetra.
Toeram-pisakafoanana akaiky ahy
Asio 'Fialofana sakafo akaiky ahy' na 'Fialofana alina akaiky ahy' ao amin'ny sari-tany Google hahitana toeram-pialofana sakafo akaiky anao any India. Azonao atao ihany koa ny mahita hoe aiza no ivon-toerana misy ny governemanta amin'ity sari-tany ity.
Sakafo any amin'ny tempoly sy moske any India
Tsy misy vidiny ny sakafo any amin'ny tempoly sy moske any India. Tsy ny fahadiovana ara-tsaina ihany fa ny fanadiovana ny culinary mandritra ny fotoam-pivavahana no ilaina. Noho izany, amin'ny manaraka mandeha any amin'ny toerana masina. Ny prasad natolotra dia hisy marika daty lany daty. Araka ny filazan'ny manampahefana avy amin'ny tontolon'ny sakafo ambony ao amin'ny firenena, izay nanamarina tamin'ny Mail. Androany ny prasad atolotra dia hanana marika daty lany daty, ary torolàlana fiarovana hentitra.
Ny foibem-pivavahana rehetra manerana an'i India dia ahitana tempoly, gurudwaras, fiangonana ary moske. Izy ireo izao dia fehezin'ny Manampahefana ara-pahasalamana sy fenitra ara-tsakafo any India.
Teo ambanin'ny fanatitra ara-pahadiovana feno fahasambarana ho an'Andriamanitra, dia nandray ny fepetra ny mpitantana. Kasaina hatao ny fenitra fiarovana ny sakafo sy ny fitandroana ny fahadiovana ao an-dakozia. Hanomana prasad ho an’Andriamanitra izy ireo, izay atolotra ny mpino avy eo.
Toeram-pisakafoanana ao India
Ireto misy ohatra amin'ny fomba hahitanao toeram-pialofana sakafo manodidina an'i India.
Fialofana sakafo any Delhi amin'ny teny Hindi
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana trano fialofana ao Delhi. Mikaroka ny “Fialofana ho an'ny daholobe ao Delhi” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Hindi aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana "Fialofana sakafo akaikin'i Delhi" na "banky sakafo any Delhi".
Ity dia sarintanin'ny Foibe Fanampiana ny hanoanana manodidina an'i Delhi, manomboka amin'ny Oktobra 2020.
Azonao atao koa ny mahita trano fialofana sakafo hafa any Delhi momba izany lisitra avy amin'ny Birao Fanatsarana ny Fialofana Urban Delhi.
Fialofana sakafo any Maharashtra any Marathi
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Maharashtra. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe, Maharashtra” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Marathi aho. Azonao atao ny mikaroka “fialofana sakafo ao Mumbai”, “banky sakafo akaikin'i Pune” na “foiben-tsakafo ao Aurangabad”. Izany dia miankina amin'ny toerana misy anao.
Azonao atao koa ny mitady sakafom-bahoaka sy trano fialofana amin'ny alina ao Maharashtra amin'ny MapmyIndia.
Fialofana sakafo any Gujarat any Gujarati
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Gujarat. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe ao Amdavad, India” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Gujarati aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana "fialofana sakafo any Surat", "efitranom-piarahamonina ao Vadodara" na "ivon-tsakafo ao Rajkot".
Azonao atao koa ny mitady sakafo ho an'ny daholobe sy trano fialofana amin'ny alina ao Gujurat amin'ny MapmyIndia.
Fialofana sakafo any Kerala any Malayalam
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Kerala. Mikaroka “fialofana ho an'ny daholobe akaikin'i Thiruvananthapuram, India” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Malayalam aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana "fialofana sakafo ao Kozhikode", "efitranom-piarahamonina ao Kochi" na "dakozia iombonana ao Kollam".
Azonao atao koa ny mitady sakafo ho an'ny daholobe sy trano fialofana amin'ny alina ao Kerala amin'ny MapmyIndia.
Fialofana ara-tsakafo any West Bengal amin'ny fiteny Bengali
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i West Bengal. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe, West Bengal” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Bengali aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana “trano fialofana ho an'ny daholobe ao Kolkata”, “efitranom-piarahamonina ao Asansol” na “dakozia ho an'ny vondrom-piarahamonina ao Siliguri”.
Azonao atao koa ny mitady sakafom-bahoaka sy trano fialofana amin'ny alina any West Bengal amin'ny MapmyIndia.
Fialofana ara-tsakafo ao Tamil Nadu amin'ny fiteny Tamil
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Tamil Nadu. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe, Tamil Nadu” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Tamil aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana “fialofana amin'ny alina ho an'ny daholobe any Chennai”, “efitranom-piarahamonina ao Coimbatore” na “dakozia ho an'ny vondrom-piarahamonina ao Madurai”.
Azonao atao koa ny mitady sakafom-bahoaka sy trano fialofana amin'ny alina ao Tamil Nadu amin'ny MapmyIndia.
Fialofana ara-tsakafo ao Karnataka any Kannada
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Karnataka. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe, Karnataka, India” ao amin'ny Google Maps amin'ny fiteny Kannada aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana “fialofana amin'ny alina ho an'ny daholobe any Bangalore”, “foiben'ny vary ho an'ny daholobe ao Dharwad” na “dakozia ho an'ny vondrom-piarahamonina ao Mysore”.
Azonao atao koa ny mitady sakafom-bahoaka sy trano fialofana amin'ny alina ao Karnataka amin'ny MapmyIndia.
Fialofana ara-tsakafo ao Andhra Pradesh any Telugu
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Andhra Pradesh. Mikaroka ny “fialofana ho an'ny daholobe, Karnataka, India” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Telugu aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana “fialofana amin'ny alina ho an'ny daholobe ao Visakhapatnam”, “ivon-tsakafo maimaim-poana any Vijayawada” na “dakozia ho an'ny vondrom-piarahamonina ao Guntur”.
Azonao atao koa ny mitady sakafo ho an'ny daholobe sy trano fialofana amin'ny alina ao Andhra Pradesh amin'ny MapmyIndia.
Fialofana ara-tsakafo ao Jammu sy Kashmir amin'ny fiteny Urdu
Ity dia ohatra iray amin'ny fitadiavana toeram-pialofana ara-tsakafo manodidina an'i Tamil Nadu. Mikaroka “fialofana ho an'ny daholobe ao Jammu sy Kashmir” ao amin'ny Google Maps amin'ny teny Urdu aho. Azonao atao ihany koa ny manandrana "fialofana ho an'ny daholobe ao Srinagar", "foiben-tsakafo maimaim-poana ao Jammu" na "dakozia fiaraha-monina ao Anantnag".
Azonao atao koa ny mitady sakafo ho an'ny daholobe sy trano fialofana amin'ny alina ao Jammu sy Kashmir amin'ny MapmyIndia.
Any amin'ny toerana iray ny sary fonony Visakhapatnam, India. Sary avy amin'i Jessica Wilson on Unsplash
Toeram-panampiana mosary any Uttar Pradesh
Iza no shampoo anti-hairfall tsara indrindra any India?
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any India?
Ny glucometer tsara indrindra any India
Aprily 23, 2022
Toeram-pisakafoanana amin'ny rivodoza Amphan